I-Casawagen - I-Surf & Yoga Beach house. Suite #1 - I-Airbnb
I-Casawagen - I-Surf & Yoga Beach house. Suite #1
Igumbi elise- ihotele sinombuki zindwendwe onguCurtis
UCurtis unezimvo eziyi-115 zezinye iindawo.
Ukuba ufuna ubuhle nokuzola, iCasavaila ikulungiselele. Njengendawo engaqhelekanga yokuya kwiparadesi, sinolwandle olukude, indawo ekhuselekileyo yokusefa, i-30$ massages, iiseshini ze-yoga ezimnandi kunye neintanethi/indawo yokusebenzela. Iholide elungele nabani na ofuna ukuphumla, ii-hammock, kunye nendalo ekrwada, oh kunye neetshona zelanga ezimangalisayo ezikumgama wemizuzu eyi-3 kuphela, okanye amanyathelo ayi-100 okuya elunxwemeni. Ubutofotofo obutofotofo, kodwa usehlathini. Ibhafu yakho wedwa namanzi ashushu
Iflethi 1 Eli gumbi lineebhedi ezinkulu ezimbini ibe lijonge ulwandle oluhle. Uza kufumana ishawari epholileyo ngaphakathi kwigumbi lokuhlambela. Igumbi lethu elivulekileyo, kunye nabalandeli bethu abaphethe kakhulu baqinisekisa ukuba uhlala kamnandi ebusuku. Kanye ngaphandle komnyango wakho ungaphumla uze ubukele ukutshona kwelanga kwibhedi yakho ekuthiwa yi-hammock.
Indawo entle ekuthiwa yiCasaylvania igciniwe, idibanisa indalo yeNicaragua 's Southern Pacific Coast. Le ndawo ibalungele abahambi abaphumayo abakhangela into yokwenene, epholileyo nekude kwiindawo ezingaqhelekanga.
ICasaylvania yindlu enamanqanaba amaninzi eyakhiwe ngendlela elungele indalo ukunciphisa unyawo lwayo. Ubugcisa ngabom buye benza indawo yethu phakathi kwendalo ngoxa isagcina ubunewunewu njengenxalenye yento yakho enokonwatyelwa. Yonwabela ukuzola nge-sunsets ezimangalisayo ezijonge i-Playa Escameca.
Ngekhitshi elikhulu nelisetyenziswa nangabanye abantu, lenza kubekho ixesha elimnandi elingabiziyo ukuze ukwazi ukuzenzela ukutya ngendlela ofuna ngayo kwaye nini. Akukho venkile yokutya okanye ii-ATM kule ndawo, nceda ucebe kwangaphambili. Nangona kunjalo sineevenkile zokutyela ezikufutshane, nceda ufumane inkcazelo engakumbi kunye namaxabiso kwicandelo lethu lasekuhlaleni elifumaneka ngezantsi.
I-Casaylvania ineziselo eziliqela ezinokuthengwa kwindawo yethu kuquka ibhiya, i-rum, iwayini, ijusi kunye nesoda. Sine-spa yasehlathini ekufutshane kunye nemasaji yasekuhlaleni kwaye sinikezela ngebhodi yokusefa kunye ne-sUP. Siyakwazi nokubhukisha imisebenzi yakho nenye ishishini lasekuhlaleni.
Isiqwenga sethu separadesi sihleli ecaleni kwePlaya Escameca ngaphakathi kwintsapho yaseCosta Dulce apho ihlathi lidibana nolwandle. Zininzi izinto ezintle ezifihlakeleyo kule ndawo, ezinye ziquka iTurtle Hatchery eselunxwemeni, ekufutshane neCasaliday. Le projekthi yeengcambu zengca iqhutywa ngempumelelo ngumbutho obizwa ngokuba yiVital Actions.
IBeach Rancho yindawo esiyithandayo yasekuhlaleni eselunxwemeni ngqo. Banikezela ngokutya okufreshi neziselo ezibandayo, zonke ngamaxabiso afikelelekayo. Sicebisa ukuba yonke intlanzi ne-mojito emnandi ukuze utye kamnandi. Ngaphezu koko, ungafumana ikhaya lendalo lezilwanyana zasekuhlaleni ezinjengeentaka neenkawu, ezinokubukwa kwi-paddleboard, eqeshwe kwindawo yakho yokuzonwabisa.
Iziko leholide elikufutshane, iCosta Dulce, linezinto eziyi-3 zemihla ngemihla ezisempilweni nezinencasa zentsapho. Ungakwazi ukubhalisela ukutya komntu ngamnye okanye kwisicwangciso sokutya sansuku zonke. Isidlo sakusasa nesasemini $ 10 ngasinye nesidlo sangokuhlwa yi- $ 15.
Enye indlela eyonwabisayo kwabo bafuna ukutya kwabo yiRancho Terre, ivenkile yokutyela yasekuhlaleni efumaneka kumaqela anabantu abayi-6 nangaphezulu. Izinto onokukhetha kuzo zingenziwa kwisidlo esinye okanye njengesicwangciso sokutya sosuku lonke esisebenze kakuhle kwiindawo zokuphumla neendawo zokutyela zeqela kwixesha elidlulileyo.
Umele ubone indawo yokujonga, ekumgama omfutshane wokuba ungahamba ngeenyawo, yindawo entle yokufumana ii-sunsets. Le ndawo iye yasingatha iziphakamiso nemitshato emininzi, kunye nendawo ebonwa kumboniso odumileyo we-Survivor ngo-2010.
Umbuki zindwendwe ngu- Curtis
Ndingumnini uCurtis kodwa, ukuba andikho omnye wabaphathi bam okanye abasebenzi bam uya kuba elapho ukuze akuncede xa ufika nangexesha lokuhlala kwakho. Silapha ukuze siqinisekise ukuba uyisebenzisa kakhulu indawo yethu yolondolozo lwendalo ekhethekileyo kunye nolwandle oluyiparadesi esinethamsanqa lokuba sibe kulo. Singathanda ukuba iindwendwe zibe nemfihlo eninzi njengoko ungathanda, kodwa kusoloko kukho ukhetho lokunxulumana nabanye kwindawo yokuhlala.
Ndingumnini uCurtis kodwa, ukuba andikho omnye wabaphathi bam okanye abasebenzi bam uya kuba elapho ukuze akuncede xa ufika nangexesha lokuhlala kwakho. Silapha ukuze siqinisekise…
Iilwimi: Español, ภาษาไทย